[Official] dr.fone - A Toolkit nokuda All iOS & Android Users
matambudziko Mobile, nematurusi kuagadzirisa.
Zvose zvokushandisa uchifanira yenyu Mobile kumhanya pa 100%.
Edza mahara Edza mahara
iOS iOS Screen sahwira
iOS AZVAKAITIKA Data negadziriro yeparutivi & Dzosa
iOS vakaverengwa Data negadziriro yeparutivi & Dzosa
iOS Viber Data negadziriro yeparutivi & Dzosa
Android Data chipfudziso
More dzenhare Ezvemutauro
Makasitoma edu rudo dr.fone
Program Great! Great Customer Service!
kubudikidza Juan Carlos F, iOS
Works nguva dzose
Ndine yakaputsika Android date kupora Software kwechinguvana zvino uye vakashandisa pamusoro siyana hofisi dzeserura. Haugoni kudavira kuti nhare dzakawanda kuti akaputsa mumwe mumwe vhiki. Izvi zvinondibatsira Nokutsiva nemakasitoma mashoko uye magwaro anokosha kubva zvavanoshandisa.
kubudikidza Setcom IT chikwata, Android
Best Software nokuti iOS
Dr. Fone ane kusimba nyore UI pamwe akatsanangura zvinoshamisa danho nedanho instructions, saka hapana anogona kuenda zvakaipa. Ndicho yakanakisisa Data Recovery Software Ndakasvika mhiri.
kubudikidza Tyrone Williams, iOS
dr.fone Toolkit - Android Data Recovery chigadzirwa
Dr.Fone ndiye ichangoburwa shamisa chigadzirwa akasikwa, Unbeatable, kumbofunga kure, pfungwa zvinoshamisa, trully kukuru. Izvi ungati, Dr.Fone zvakachinja chiso Android pacharo kupinda hachizi chiso itsva. Dr.Fone Anoshanda ose zvigadzirwa, mano kunyange kusvikira duku micro chip. Richaita nyika kutendeuka vazhinji kudaro, minhenga itsva zvinoshamisa, kwete chete kuti, sei anogona kuita zvose uye chinhu. chero uye zvisinei. Chinhu nesimba kuti.
kubudikidza Gerard Katu, Android
kubudikidza Eduardo, iOS
Ndakafunga kuti ndakanga ndarasikirwa vanasikana vangu dzakanaka 16 okuberekwa mapikicha uye mavhidhiyo nokusingaperi. software iyi akaponesa nepfungwa dzangu !! Kana paiva yepamusoro rating, Dr fone chokwadi ndiye kundoitora neni. Uye handina kuwana chinhu kuti ndinzwe kuti nzira pamberi. Ini iyeni akapinda paIndaneti vachitsvaka fomu remitemo nekuti mari yangu vakanga yakaderera kuti ini couldn''t mari uye yave achichema kusvikira Ndakawana chimwe uye akashatirwa kuti hafu mutengo !! Mazvita dr.fone !!
kubudikidza Darlene, Android